Mpanafika apôkôla eo am-pelatanana - mpamatsy & F orinasa mpangataka kiraro any Shina
Grey Poly Cotton Waiter Fantsom-bolo fohy kapa eo am-paosy U301S0500A
Marika CHECKEDOUT Item Code U301S0500A Fandraisana SAIZANA Teny fototra ny chef apron, apron fohy, apron, waiter apron, apronana vita amin'ny lamba 65/35 poly / cotton GSM.235g Manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia mioritra amin'ny loto, miaro ...
Divay mena poleta voakaly any waiter any amina paosy U301S0400A
Marika CHECKEDOUT Item Code U301S0400A Lehilahy SAIZITRA Teny fototra ny chef apron, apron fohy, apron, waiter apron, apronana vita amin'ny lamba 65/35 poly / cotton GSM.235g Manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia mioritra amin'ny loto, miaro ...
Fotsy vita amin'ny poleta fotsy pensilihazo poleta fotsy vita amin'ny paosy U301S0200A
Marika CHECKEDOUT Item Code U301S0200A Lehilahy SAIZITRA Teny fototra ny chef apron, apron fohy, apron, waiter apron, apronana vita amin'ny lamba 65/35 poly / cotton GSM.235g Manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia mioritra amin'ny loto, miaro ...
Paola mainty poleta mavokely mainty poma vita amin'ny paosy U301S0100A
Marika CHECKEDOUT Item Code U301S0100A habe MISY SAIZANA Ny teny fototra amin'ny chef apron, apron fohy, apron, waiter apron, apron mainty Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia mioritra amin'ny loto, miaro ...
Canvas Waf Chef Apron Amin'ny poketra CU378S135022U4
Marika CHECKEDOUT Item Code CU378S135022U4 Lehibe SAIZITRA Teny fototra ny chef waiter apron, onja apron, canvas fohy apron Fabric 45/55 poly / cotton GSM.300g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny fehin-kase polyester dia miorim-paka, tsy mahatohitra ...
Akanjo kafe lokom-boakan-kafe loko Chef Apron Amin'ny paosy CU378S134022U4
Marika CHECKEDOUT Item Code CU378S134022U4 Lehibe SAIZITRA Teny fototra ny chef waiter apron, onja apron, canvas short apron Fabric 45/55 poly / cotton GSM.300g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny fehin-kase polyester dia miorim-paka, tsy mahatohitra ...
Fotsy miloko volom-borona loko fotsy volo any Chef Apron Amin'ny paosy CU378S133022U4
Marika CHECKEDOUT Item Code CU378S0133022U4 Lehibe SAIZY Ny teny fototra amin'ny chef waiter apron, ny valahany, ny kanadiana fohy apron Fabric 45/55 poly / cotton GSM.300g manjaitra Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, tsara ny fanoherana ny abrasion, ny fihenan-tena ambany, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia mioritra amin'ny loto, miaro ...